देशभर मौसममा बदली, आज पानी पर्ने सम्भावना
काठमाडौं । पश्चिमी वायुका कारण आज देशभरको मौसममा बदली आएको छ । “पश्चिमी वायुको प्रभाव निरन्तर देखिएको छ,” मौसमविद् सजिना शाक्यले भनिन्, “अहिले पश्चिमी भूभागमा पूरै बदली छ । काठमाडौंमा पनि मौसममा बदली...
काठमाडौँ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री योगेश भट्टराई नेपाल भ्रमण वर्षको शुभारम्भ गर्न अस्ट्रेलियामा पुगेका छन् । मंगलबार मन्त्री भट्टराई अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा पर्यटन वर्ष उद्घाटनका क्रम...
अष्ट्रेलियाको सुरक्षाकर्मीहरूले योगेश भट्टराई नेतृत्वको भ्रमण वर्षको र्यालीमा रोक लगाएका छन् । भ्रमण वर्ष २०२० को आरम्भ गर्न मंगलवार सिड्नी शहरमा आयोजित जुलूसमा रोक लागेको हो । साउथ एसिया डट कम डट ए...
विकासको निमित्त सन्तुलित दृष्टिकोण चाहिन्छ
के नेपालको वर्तमान अगाडि बढ्नको लागि सक्रिय छ ? के राज्यको सम्पूर्ण ध्यान प्रगतिको लागि केन्द्रित छ ? समग्र घटना क्रमको आकलन गर्दा सकारात्मक जवाफ दिन सकिँदैन । राजनीतिक व्यवस्थापनमा राज्य अहिले पनि उत...